အကြင်နာနန်းတော်: 100% အောင်မြင်မှုပေးနိုင်တဲ့အရာ......????
အင်္ဂလိပ် အက္ခရာ ABCD . . . Z အထိဆိုရင် *၂၆* လုံး ရှိပါတယ်။ အဲဒီ အက္ခရာတွေကို
ဒီလိုနံပါတ်စဉ်တွေ ထိုးပြီး စီကြည့်ရအောင် . . .
အဲဒီလို စီပြီးသွားရင်တော့ သက်ဆိုင်ရာ အက္ခရာကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နံပါတ်တစ်ခုစီ
*ု *(Hard Work) = H + A + R + D + W + O + R + K
8 + 1 + 18 +4+ 23 + 15 + 18 + 11 = *98 %*
အဲဒါကြောင့် အလုပ်ကြိုးစားခြင်းဟာ *၉၈* ရာခိုင်နှုန်း အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
(Knowledge) = K + N + O + W + L + E + D + G + E
11 + 14 + 15 + 22 + 12 +5+4+7+5= *96 %*
ဗဟုသုတပြည့်စုံခြင်းကတော့ *၉၆ %* အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
(Love) = L + O + V + E
12 + 15 + 22 +5= *54 %*
ချစ်ခြင်းတရားဟာ အောင်မြင်ဖို့ *၅၄ ရာခိုင်နှုန်း*ပဲ ရှိပါတယ်။
(Luck) = L + U + C + K
12 + 21 +3+ 11 = *47 %*
ကံတရားကတော့ အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ *၄၇ ရာခိုင်နှုန်း*ပဲ ပတ်သက်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင်တော့ မဟုတ်သေးဘူး။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အပြည့်ရနိုင်မယ့် အကြောင်းတရား
(Money) = M + O + N + E + Y
13 + 15 + 14 +5+ 25 = *72 %*
မဟုတ်ပြန်ဘူး . . . ပိုက်ဆံကလည်း *၇၂ ရာခိုင်နှုန်း*ပဲ စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်။
(Leadership) = L + E + A + D + E + R + S + H + I + P
12 +5+ 1 +4+5+ 18 + 19 + 8 +9+ 16 = *89 %*
ခေါင်းဆောင်မှုကောင်းရင်တော့ *၈၉ ရာခိုင်နှုန်း* အောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။
စိတ်နေစိတ်ထားလေး ပြောင်းပြီး စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ ဟုတ်ပြီ . . .စိတ်နေစိတ်ထား။
(Attitude) = A + T + T + I + T + U + D + E
1 + 20 + 20 +9+ 20 + 21 +4+5= *100 %*
ရပါပြီ . . . ဘ၀ကို *၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း* အောင်မြင်မှုပေးနိုင်တဲ့ အရာကတော့
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကို ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ ဘ၀တစ်ခုလုံး
ပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ အခု အဖြေကို သိရပါပြီ။ ကဲ . . . သူငယ်ချင်းတို့
ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ . . . ?
(Forward Mail ကပါနော်..)
ပို့စ်ရေးသားသူ လင်းလင်း ရက်စွဲ Wednesday, November 02, 2011